Ciidamada Syria oo weerarka ku haya Xama - BBC News Somali
Ciidamada Syria oo weerarka ku haya Xama
Image caption Taangiyada ciidamada Syria
Wararka ka imanaya Syria ayaa sheegaya in dadku ay ka qaxayaan tuulooyinka u dhaw magaalada Xama, iyada oo ciidamada dowladda ay u soo socdaan dhinaca bartamaha magaalada. Taangiyada ciidamada ayaa dukheynayay xalay magaalada.
Kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in weerarku mar kale soo laabtay xalay kadib salaadii cishaha, goobaha la bar tilmaameedsaday waxaa ku jira isbitaal iyo xaafado la degan yahay. Dad badan ayaa lagu soo warramay in la dilay, taasi oo kor u sii qaadeysa tirada dadka la dilay Axaddii, markaasi oo in ka badan boqol la sheegay inay dhinteen. Waxa ay u muuqataa in xukuumadda Syria ay ka go'an tahay inay joojiso kacdoonka Xama iyada oo awood isticmaaleysa.
Laakiin magaalada tobanka kun ee qof ku weysay weerarada uga imanayay ciidamadii daacadda u ah Madaxweyne Bashaar aabihii Asad sanadihii 1980s ayaa waxay u muuqataa mid weli wax maqli la oo ka soo horjeeda. Dadku wali waxa ay awoodaan inay mudaharaadaan, inkasta oo ay tiradoodu aad u yar tahay.
Waxa ay taageero ka heystaan saaxiibadooda kale ee kacdoonka wada oo iyaguna waddooyinka isugu soo baxay qaybo kale oo ka mid ah waddanka, kuwaasi oo ku baaqaya in la soo gabagabeeyo weerarka lagu hayo Hama.
Laakiin iyaga xitaa waa la bartilmaameedsaday, waxaana dad badan looga laayay duleedka magaalada Dimishiq sida deegaanada Irbin iyo Kisweh.
Meelo kale oo dalka ah xaaladdu ma wanaagsana. Magaalooyinka Deirezzor iyo Boukamal oo ku yaalla dhinaca waqooyi weli weeraro ayaa ku socda waxaana la dilay dad badan.
Dadka mudaharaadaya ee reer Syria ayaa waxa ay u careysan yihiin caalamka, gaar ahaan dunida Carabta oo eeganaya, kana aamusan iyaga oo la dilayo.